Ahoana no hivarotra ny sambo-tserasera tsikelikely no fomba mora ny fomba ahafahako fivarotana ny Yacht haingana amin'ny alalan'ny aterineto aterineto fanompoana barotra
Ahoana no Amidio ny Boat ho an'ny Avo Indrindra Price
Tena hevitra tsara hatao fanadihadiana ny sambo mba hahafahanao mianatra momba sy manamboatra izay mety olana eo anoloan'ny sambo mandeha eny an-tsena. Raha toa ka ny ambany na ny topsides loko mila asa, manao izany. Raha ianao nandoko ny Hull, mampiasa afa-tsy fotsy na maizina-manga loko. Na izany aza, fahazoan-dalana hiditra broker iray tsy mandany vola amin'ny elektronika upgrades. Ianao ihany no mahazo ampahany kely izany fampiasam-bola indray.
Vidiny izany marina. Vidiny izany marina. Vidiny izany marina.
Mandehana amin'ny tsipika sy hanamarinana ny aterineto rehetra toerana. Yachtworld, Boat Mpivarotra, Boats.com sns. sns. Pirinty ny dika mitovy ny rehetra ny azo ampitahaina sambokely ny anao. Mariho ny fitambaran'ny isa. Mariho izay endri-javatra manan-danja hafa sambo dia na tsy manana. Tadiavo koa amin'ny sambokely hafa maotera ora, no manana tranofiara, ambany loko, etc., sns. Izany no tena manan-danja rehetra. Mila mampitaha paoma amin'ny paoma. (Ohatra - ambany voaloko trailerable ivarotana sambo kely.) Mariho ny toerana misy ny sambo dia voatanisa. (Ohatra - Florida sambo ivarotana tsy - hafanana, masoandro, rivotra, sira sy taona fampiasana manodidina.)
Antsoy vitsivitsy izay manana sambo mpanakalo izay mitovy amin'ny anao. Lazao aminy hoe iza ianao ary inona anananao. Ankamaroan'ny mpanakalo tokony ho tena fiaraha-miasa. Anontanio azy ireo ny antony mahatonga ny sambokely izy ireo lisitra tsy nivarotra. Anontanio azy ireo izay mihevitra fa mety haka ny mivarotra ny sambo. Anontanio azy ireo izay mihevitra ny sambo dia mendrika. Manontany azy ireo raha izy ireo handeha varotra izany ny zavatra homena anao ho azy.
Jereo ny Pricing BUC mpitarika sy NADA, nefa tsy mametraka finoana be izay lazainy. Ny ankamaroan'ireo ireo, raha ny hevitro, dia diso tanteraka fa izy ireto no zavatra ny banky ho fototry ny sambo sarobidy amin'ny findramam-bola. Koa na dia mbola diso zavatra mba handinika.
Ankehitriny mipetraka. Jereo ny angon-drakitra rehetra ianao nanangona. Kajy zavatra tena vidin'ny mba hihazona ny sambo nandritra ny volana vitsivitsy. Aoka ho marin-toetra amin'ny tenanao! (Fanamarihana: izay tokony ho eo amin'ny sambo tsy misy ifandraisany amin'ny zava-dehibe ny antsinjarany.) Aza manahy mikasika ny fanaovana "ahetsiketseho efitra" eo amin'ny isan'ny. Dia tsy mila miahiahy momba ny "efitra mba hifampiraharaha" raha toa ka tsy misy olona miantso. Ankehitriny vidiny ny sambo mba ho ny manaraka mba hivarotra. Fantatro fa mampalahelo fa tsy mahatsiaro mandrakariva misy mpivarotra nilaza tamiko "Wow, Dia nivarotra ny sambo ho mora!"
Top folo Soso-kevitra Fa Mivarotra ny Boat
1. Market izany!: Hanambara mafy. Place dokam-barotra ao an-toerana Mitsangantsangana asa fanaovan-gazety, ny lehibe gazety isan'andro sy ny, raha lehibe ny sambo na ny iray amin'ireo voafetra fisian'ny izay mpividy dia azo inoana fa mandeha amin'ny fanjakana mba hijery, mametraka dokam-barotra ao amin'ny pricier isam-paritra sy ny firenena toerana. Sary dokam-barotra hanatona kokoa ny fifamoivoizana. Hofan-trano toerana amin'ny lafiny sasany lalambe-jatony maro izay mpandalo mahita azy-mihoatra noho ny ao an-lalana mivily.
2. Voaroaka-up!: Atombohy ny motera, ary manafana azy adiny iray mialoha ny fanantenana avy mamangy ny sambo. Ny maty bateria na balky start-na dia ho tena tsara ny fandehany maotera-mpividy eny.
3. Antoky ny Manohana: Tarehiny dia zava-dehibe. Tenan'ny-on fanaka savoka azo ampiharina sy namaoka-eny haingana sy mora. Ny hazavana dia tsy haharitra mihoatra noho ny andro, saingy tonga lafatra fa manantena miantso sy milaza izay tiany hahatongavana eo amin 'ny ora.
4. Foana Promise: Tsara kokoa ny haneho foana stowage faritra sy ny fanamarihana ny fomba malalaka izy ireo avy eo mba hanana ny fitaovana rehetra efa feno ao aminy hatramin'ny manafotra. Esory ny dikany izany.
5. Touch Points: Ny asa tsipiriany matihanina dikany ho madio mangalahala sambo eo amin'ny toe-javatra. Raha toa ny sambo tahan'ny "eo ho eo" na "soa" mifantoka fotsiny amin'ny glaring kokoa tsiny. Tokony homarinana-avy harafesina stains mandeha rà avy amin'ny Fittings, indray-kasety shredded baotin'i mivatra, de-menaka ny maotera, manadio ny bilge, sns. Raha toa ka ny efitra dia musty, surreptitiously mametraka rivotra freshners.
6. Fogged-avy: Raha mazava ambainy no voarangotra na nanakorontana ny taona, manala azy fa ny voalohany fijerena.
7. Ambany Job: Raha toa ny sambo dia ambany nohosorany loko mainty, mampihatra ny akanjo vaovao. Izany no mahatonga ny sambo fijery maranitra. Mitifitra loko ihany koa outboard sy hentitra fiara skegs izay manana ny loko tonta-eny.
8. Ranomasina Fitsarana: Miaraka amin'ny lamba nesorina, rehetra fa ny fitaovana fiarovana stowed an-tanety sy ny fahazavana amin'ny solika sy ny rano, ny sambo sitraponao fiaramanidina mora kokoa, hiatrehana amim-pahakingana kokoa, ary hahazo ny haingana-farany ambony haingana. Hiezaka ny handresy lahatra ny mpividy mba mametra ny mitaingina-miaraka namany sy ny fianakaviany hoe vitsy araka izay azo atao, noho ny antony ambony, ary toy izany koa ny tena "roominess" ny sambo sy mafy dia tsy hita miharihary.
9. Paper Chase: Manana anaram-boninahitra rehetra, fisoratana anarana, maharitra fiantohana ary, raha misy, service voasoratra ao amin'ny tanana ao amin'ny mpamehy. Tena mahavariana, even if the buyer's initial reaction to it seems ho-hum.
10. Aza mamita-tena: Figure avy ny ambany-tsipika vidin'ny tsara mialoha fihaonana mpividy voalohany. Diniho ny dolara vola lany amin'ny dokam-barotra, storage and maintenance while it's for sale as well as the time costs involved in showing the boat.
Entina: Three More Tips...
11. Mangina-Mangina: AZA hita ny tsara indrindra vidiny an-telefaonina amin'ny olona iray izay tsy nahita ny sambo. Mialoha ny mpividy mahita ny sambo, izy ny fihetseham-po tsy nahazo fampiasam-bola. Afa-, ahoana no ahafantaranao, ary na dia manam-bola izany? Plus, mpividy eo amin'ny fefy manana namana miantso matetika ho toy ny "fanantenana vaovao" ao anatin'ny ezaka mba hamandrika anao.
12. Get Paid: Cash no mpanjaka. Taratasim-bola dia be izy ireo indray mandeha fiala-. Antsoina hoe "ny Banky taratasim-bola" tsy mba toy ny tsara toy ny volamena. Ireo rehetra ireo aza dia "Ary mampahafantatra" fa ny mpividy manana habetsaky ny maso noho eo ny daty ny olana. Afaka ho foanana mora foana, toy ny fanafoanana ny maso manokana. Aza sonia ny sambo ho tra fantatrareo afaka handany ny ny vola mpividy.
13. Big Fanontaniana: Mpividy manontany foana hoe nahoana ianao no mivarotra. Tsara, vola adala. Nefa ianao tsy afaka milaza izany (na fa ny reraka ny tinkering tsy misy soa azo avy amin'ny misy fiantohana). Lifestyle fanovana no valiny tsara indrindra. Say you want to try cruising and can't do it in an open boat, ny ankizy tsy hiaraka aminao intsony ka tsy mila Ski sambo, tsy hamono-dranomasina intsony Dia toy izany ny downsize dia mba, na inona na inona.